အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ - [နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ]
> အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့
3 - Link ကိုဒိုမိန်း WordPress ။
6 - Link ကိုဒိုမိန်း WordPress
အသစ်ကအိမ်ရှင်မှ wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
အိမ်ရှင်ပြောင်းလဲနေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုဒိုမိန်းကိုပြောင်းလိုသောအခါ, ကသစ်ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူနောက်တဖန် functioning ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး wordpress ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်လုပ်ဖို့ acions အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
Wordpress.com အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ် Create
သို့သော်ဤလမ်းညွှန်အောက်ပါကြောင့်အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်သင့်!
ဒါဟာမူရင်း site ကိုသေချာပေါက်အားပိတ်ပြီးခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးအဖြစ်, တယောက်ကိုတယောက်ဒိုမိန်းကနေ wordpress ကို site ကိုကော်ပီကူးဖို့ဘယ်လိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စျေးပေါ web hosting ကုမ္ပဏီများသည်
1 - Backup ကိုအသစ် server ကိုမှ wordpress ကို site ကို restore,
2 - Wordpress ကိုဒေတာဘေ့စရွှေ့ပြောင်း,
wordpress ကို site ကိုတင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို - 1
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, တစ်ဦး FTP client တစ်ခုကိုသုံး, ဆာဗာကိုချိတ်ဆက်လျက်, wordpress ကိုဖိုင်တွေ်တရှောက်လုံးကို folder ကို download လုပ်ပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်, အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒေသခံများနှင့်ဆာဗာကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. ပြုလုပ်နာရီအနည်းငယ်အထိကြာလိမ့်မယ်။
FileZilla ကအခမဲ့ FTP ကိုဖြေရှင်းချက်
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : wordpress ကိုတင်ပို့တစ်ခုလုံးကို site ကို
ဤ action ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, လာမယ့်ခြေလှမ်းက, Wordpress ကိုဒေတာဘေ့စရွှေ့ပြောင်းဖျော်ဖြေဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။
ဒေသခံ folder ကို .htaccess နဲ့တူက hidden file တွေကိုအပါအဝင်အားလုံးဖိုင်များ, (ကဒေါ့နှင့်အတူစတင်နာမည်ဖိုင်တွေ Linux ကိုစနစ်များအပေါ်ဖိုင်တွေဝှက်ထားကြသည်) ထို့နောက်ဆံ့သငျ့သညျ။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : wordpress ကို site ကိုဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု
2 - တယောက်ကိုတယောက် server ကနေဒေတာဘေ့စရွှေ့ပြောင်းမည်
, ဟောင်းဆာဗာပျေါသို့သွားပြီးအဆိုပါ wordpress ကိုဒေတာဘေ့စဖွင့်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အရေးယူရွေးချယ်ပါ။
က MySQL, Open Source relational database ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : က MySQL ပို့ကုန် wordpress ကို site ကိုဒေတာဘေ့စ
အဲဒီမှာရုံ choosen format နဲ့ SQL ကြောင်းသေချာအောင်နှင့်ပို့ကုန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : ပို့ကုန် wp ဒေတာဘေ့စ
ဒေတာဘေ့စအရွယ်အစားနှင့် server ကိုမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. ဖိုင်တစ်ဖိုင်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာ wordpress ကိုတင်ပို့ဒေတာဘေ့စပါရှိသည်, နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်သငျ့သညျ။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : ဆာဗာအသစ်မှ wordpress ကိုဒေတာဘေ့စပြောင်းရွှေ့
3 - Wordpress ကိုတင်သွင်း mysql ဒေတာဘေ့စ
အခုတော့သစ်ကို server ပေါ်တွင်, အအထက်ရှိ cPanel web hosting အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အခြား website ကအုပ်ချုပ်မှု tool ကိုဖွင့်လှစ်လျက်, က MySQL Databases များကိုရှာပါ။ ဒေတာတင်သွင်းမတိုင်မီကအဆိုပါဒေတာဘေ့စအသစ်တစ်ခုဒေတာဘေ့စ, အသုံးပြုသူနှင့်အသုံးပြုသူ access ကို setup ကိုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အထက်ရှိ cPanel, ရွေးချယ်မှုများ hosting ပလက်ဖောင်း
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : အထက်ရှိ cPanel hosting အတွက်ပေါ်က MySQL databases ကို
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : အဆိုပါရွှေ့ပြောင်း wordpress ကိုများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုဒေတာဘေ့စ၏ဖန်ဆင်းခြင်း
စာလုံး၏ရောနှော, နံပါတ်များ, အထူးအက္ခရာများ - ထိုအခါတစ်ကောင်းသောစကားဝှက်နဲ့တစ်အသုံးပြုသူအသစ်, ထည့်ပါ။ စကားဝှက်ကိုအစဉ်အဆက်, အောကျမေ့သာကူးယူခြင်းနှင့်တစ်ချိန်က paste လုပ်ထားတဲ့ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းကို Notepad နဲ့တူ ++ tab ကိုသည်အထိနေရာလေးကိုတစ်နေရာရာကိုနောက်ခြေလှမ်းကကယ်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
notepad ++ အခမဲ့ source code ကိုအယ်ဒီတာ
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : MySQL database ကိုတစ်အသုံးပြုသူအသစ်ထည့်သွင်းခြင်း
ဒီအသုံးပြုသူ Wordpress ကိုများအတွက်ဒေတာဘေ့စများ၏စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, အားလုံးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်တကွ, ဒေတာဘေ့စဖန်တီးသုံးစွဲသူထည့်ပါ။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : MySQL database ကိုမှအသုံးပြုသူ assign
အခုတော့ phpMyAdmin အတွက် MySQL database ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း, သွင်းကုန် option ကိုသွားပါ။ ဤသည် wordpress ကိုတင်သွင်းဒေတာဘေ့စဖွစျမညျဘယျလိုသည်။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : wp DB တင်သွင်းပြောင်းရွှေ့
ဤတွင်ရှေ့မှာဖန်တီးလိုက်ပါပြီသောဖိုင်ကိုရွေး, ရွေးချယ်ထားသော format နဲ့ SQL ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်နှင့်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတင်သွင်း box ကို uncheck လုပ်ပါ။ အဲဒါကို run ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထက် script ကို database ကိုတင်သွင်းဖို့ပိုရှည်တခါတရံယူစေခြင်းငှါ, အဖြစ်ဤကြီးမားသောဆိုက်များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။
ဤ box unchecking အသုံးပြုပုံ script ကိုကကျနော်တို့ကဒီမှာလုပ်ချင်ကားအဘယ်သို့သောအချိန်ကုန်ကွပ်မျက်, ရောက်ရှိအမှု၌ data တွေကိုတင်သွင်းရာမှရပ်တန့်မည်မဟုတ်။
နှင့်သင်တန်း၏, OK ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒေတာဘေ့စတင်သွင်းစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ပါ။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : phpmyadmin အတွက် wordpress ကိုတင်သွင်း SQL options များ
အဆိုပါ SQL တင်သွင်းပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက်, တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းစကား phpmyadmin ထဲမှာပြသသင့်ပါတယ်။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : အောင်မြင်သောတင်သွင်း SQL wordpress ကို
4 - Wordpress ကိုဒေတာဘေ့စက်ဘ်ဆိုက်
အခုတော့ဒေတာဘေ့စ setup ကိုကြောင်းကြောင့်ဒေသခံ backup လုပ်ထားအပေါ်ဖိုင်ကို wp-config.ini ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်, ဒီသစ်ကိုဒေတာဘေ့စနှင့် ပတ်သက်. wordpress ကိုပြောပြရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ file ကိုအမြစ် folder ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ကြောင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးဖိုင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်လွှဲပြောင်းသေးကျော်မဟုတ်ပါလျှင်ပင်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
အဲဒီမှာအောက်ပါလိုင်းများနေရာချထားနှင့်အထက်ရှိ cPanel အတွက်ယခင်ခြေလှမ်းကနေတန်ဖိုးများနှင့်အတူဒေတာဘေ့စအမည်, ဒေတာဘေ့စအသုံးပြုသူများနှင့်ဒေတာဘေ့စ password ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်:
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : Update ကို Wordpress ကိုဒေတာဘေ့စ setting များကို
5 - လွှတ်တင်ခြင်း wordpress ကို site ကို
အဆိုပါ wordpress ကိုဒေတာအဟောင်း server ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီးပါကယခုနေဆဲတစ်ခု FTP client တစ်ခုကိုသုံး, server ကိုမှဒေသခံ wordpress ကို site ကို upload လုပ်ဖို့ကိုစတင်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : wordpress ကို site ကို Upload လုပ်ပါ
ဤသည်စစ်ဆင်ရေးအများဆုံးဖွယ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးက) = ဒေတာကို download လုပ်ပါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပြီးကော်ဖီရှိသည်ဖို့ယူအဖြစ်ယူပါလိမ့်မယ်
သငျသညျထို domain name ကိုပြောင်းလဲကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒီခြေလှမ်းမလိုအပ်ပါဘူး။
သင်တဦးတည်း domain name ကိုမှအခြားမှအသစ်ဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုပြောင်းရွှေ့လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့အပေါငျးတို့သလင့်များအစားအဟောင်းတဦးတည်း၏အသစ်က URL ကိုပြသနိုင်ဖို့, updated ခံရဖို့ရှိသည်။
အလွယ်တကူဒီလိုလုပ်ဖို့ရှာရန် DB အစားထိုးမည်နှင့်အတူစတင်ပါ။
PHP ကိုရှာဖွေရေးဒေတာဘေ့စအတွက်ညှို့ update လုပ်ဖို့ tool ကိုအစားထိုးဖို့
ဝက်ဘ်ဆိုက် URL ကိုပြောင်းခြင်းခက်ခဲတဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒုက္ခ၏အမှု၌, တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုကိုးကားပါ။
wordpress ကို Codex - ဆိုက် URL ကိုပြောင်းခြင်း
လွှဲပြောင်းက်ဘ်ဆိုက်အထက်ရှိ cPanel addon ဒိုမိန်း
7 - ဘယ်လိုအခြားဒိုမိန်းတစ်ခု wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်
ဒါဟာယခုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်! သို့သော်တဦးတည်းခြေလှမ်း DNS ကိုပြောင်းလဲမှုကတဆင့်လုပ်သော URL ကိုကလက်လှမ်းဖြစ်ဆာဗာအသစ် configure ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောပျောက်ဆုံးခံရပေလိမ့်မည်။
ဤသည်စစ်ဆင်ရေးထို့ကြောင့် URL ကိုသေးအလုပ်မလုပ်လျှင်တပြင်လုံးကိုအင်တာနက်အသစ်ရဲ့ website မှာအကြောင်းကိုမသိသေးသောကွောငျ့, ကဖြစ်စေခြင်းငှါ, စိတ်ရှည်, မြင်နိုင်ဖြစ် 24h အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
မြေတပြင်လုံးကိုအင်တာနက်က၎င်း၏ domain name ကိုမှသစ်ကိုက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဆက်စပ်သည်အထိ DNS ကိုပွားကိုခေါ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်, အချိန်ကြာပေလိမ့်မည်။
သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကို web hosting အတွက်
အသစ်ကဒိုမိန်းကို WordPress site ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
အသစ်ကဒိုမိန်းကို WordPress site ကို Moving အမှန်တကယ်တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။ အသစ်ကဒိုမိန်းကို WordPress site ကိုလွှဲပြောင်းရန်, ရိုးရှင်းစွာသောဤအခြေခံအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာ:
- သစ်ကိုဒိုမိန်းဟောင်းများကို server ကနေ Copy ကူး WordPress ကိုဒေတာဘေ့စ,
- သစ်ကိုဒိုမိန်းဟောင်းများကို server ကနေ Copy ကူး WordPress ကိုဖိုင်များ,
- သစ်ကိုဒေတာဘေ့စ connection ကိုဆက်တင်များဖြင့် Update ကို wp-config.ini ဖိုင်,
- database ထဲတွင် Update ကို URLs များကို, အမှု၌သစ်ကိုဒိုမိန်းယခင် domain မှကွဲပြားခြားနားသည်။
သငျသညျကိုသာအသစ်သောအိမ်ရှင်တစ်ဦးပို့ကုန် WordPress ကို site ကိုပြုလျှင်အဆိုပါ access ကို URL ကိုအတူတူပင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်, ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်ခြေလှမ်း, မလိုအပ်ပါဘူး။
သငျသညျသစ်ကိုဒိုမိန်း WordPress ကိုရွှေ့နှင့် URL ကိုကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါကအချို့သော URL ကိုအဟောင်းကို domain name ကိုရှိသည်, သစ်တစ်ခုဒိုမိန်းဖို့ WordPress ကို site ၏အပြောင်းအရွှေ့အတွက်မှန်ကန်သော URL များကိုရှိသည်ဖို့ဒီစစ်ဆင်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ထို့နောက်နောက်ဆုံးခြေလှမ်း, မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ WordPress ကိုဒေတာဘေ့စ။
တစ်ဦးက New Web ကို Host ကသင်၏ WordPress ကိုကျဘျဆိုကျပြောင်းရွေ့နေပါသည်အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်တစ်ဦးကအဆင့်
သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကို web hosting အတွက်, အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့, ပို့ကုန် wordpress ကို site ကို, အထက်ရှိ cPanel ကို web hosting အတွက်, အထက်ရှိ cPanel hosting, အခြားဒိုမိန်းတစ်ခု wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ, အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ, အသစ်ကအိမ်ရှင်မှ wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ, အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုပြောင်းရွှေ့, wordpress ကိုဒေတာဘေ့စရွှေ့ပြောင်း, wordpress ကို site ကိုတင်ပို့ဖို့ဘယ်လို, wordpress ကိုတင်ပို့ဒေတာဘေ့စ, wordpress ကိုတင်သွင်းဒေတာဘေ့စ, wordpress ကို site ကို upload, ရွှေ့ပြောင်း wordpress ကို, ဆာဗာအသစ်မှ wordpress ကို site ကို backup လုပ်ထားနှင့် restore, တယောက်ကိုတယောက် server ကနေဒေတာဘေ့စပြောင်းရွှေ့, ဆာဗာအသစ်မှ wordpress ကိုဒေတာဘေ့စပြောင်းရွှေ့, ဆာဗာဒေသခံ wordpress ကို site ကို upload, wordpress ကိုတင်သွင်း mysql ဒေတာဘေ့စ, wordpress ကို backup လုပ်ထားနှင့် Migration, wordpress ကိုတင်ပို့တစ်ခုလုံးကို site ကို, wordpress ကိုဒေတာဘေ့စက်ဘ်ဆိုက်, ဒိုမိန်း link ကို wordpress ကို, လွှဲပြောင်းက်ဘ်ဆိုက်အထက်ရှိ cPanel, wordpress ကိုတင်သွင်း SQL, wp DB တင်သွင်းပြောင်းရွှေ့, သွင်းကုန် SQL wordpress ကို, ပို့ကုန် wp ဒေတာဘေ့စ,
အမည်* အီးမေးလ်ပို့ရန်* ဝက်ဘ်ဆိုက် မှတ်ချက်*
cashmere scarves ယောက်ျားဘို့ကောင်းသောရှိပါသလား
How do you generate leads for B2B with စျေးကွက်ရှာဖွေရေး?
စုံလင်သောရေကူးဝတ်စုံနဲ့တစ်ရှာပုံတော် - နှင့်မည်သို့ရှာဖွေနည်း
SAP S4 ကို HANA အတွက်စက်ရုံဖန်တီးလုပ်နည်း
Virgin Mobile အင်တာနက်ကို activation code ကို
တစ်ဦးက Tie ကိုရှင်းလင်းဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း